Esikhathini esidlule, kuphela kwiforamu yabablogi bekungenzeka ukuthi bahlangabezane nemibono enjenge "post", "repost", "repost". Manje ngisho nasengxoxweni abantu abavamile bangasakaza imishwana: "repostnul", "retvittnul", "yenza ukuphindaphinda." Kuyini lokhu - ukuphinda uphinde uthumele kabusha, sizocubungula ngokuningiliziwe kulesi sihloko.
I-Blogger Repost . Kuyini ?
Wonke amabhulogi abhala izihloko noma okuthunyelwe kusayithi lakhe. Lona ulwazi lomlobi, olungenalo izifaniso kwi-Intanethi. Uma othile efuna ukuthumela lesi sihloko kubhulogi yabo, umthombo kufanele uboniswe.
I-Repost ukubekwa kolwazi oyithandayo efomeni langempela, okubonisa ukubhala nokuxhumanisa okuvulekile kwasekuqaleni. Uma ungacacisi ukubhala noma isixhumanisi esihlokweni, lezi zenzo zibizwa ngokuthi ikhophi ejwayelekile-yokunamathisela, noma ukweba.
Ukuhlubuka noma ukuphindaphinda kungumqondo ofanayo. Kulula uma uphinde uthumele, ungangeza umbono wakho. Isibonelo, izinkundla ngokuvamile zibhalela impendulo yombuzo, bese ufaka umbhalo okopishwe ngesixhumanisi emthonjeni.
Ukukopisha nge-attribution kungenziwa yonke into noma ingxenye yayo. Kukholelwa ukuthi izenzo ezinjalo ziletha i-blog ye-TIC ne-PR, kepha lezi "zinkanyezi" azizona wonke umuntu. Izingosi ezincane ezihambisa izinsiza "ezinamafutha" zingathumela "kwi-sandbox", ngoba izinjini zokusesha ze-original zizobala imininingwane ekhokhelwe kuqala. Yingakho yonke i-blogger enhlobonhlobo yakhe ngaphansi kwesihloko ngasinye ibeka izinkinobho zokuxhumana zenhlalo ezenza umsebenzi wokuphinda uthumele.
Izinkinobho "Repost" futhi "Phinda": kuyini?
Emiphakathini, amaphephandaba, kaningi, ngokuphindaphinda futhi aphinde aphume, asho uhlobo oluthile lwesenzo. Isibonelo, ku-LiveJournal kuhlale ku-"Repos" noma "Uttav emagazini wakho" ngaphansi kwesihloko, esinokuhlukile.
Uma uphinda uthumele wena awukwazi ukushintsha okuqala, engeza imicabango yakho ematheksthi uqobo. Ngaphezu kwalokho, uma umbhali enquma ukususa isihloko sakhe, khona-ke umbhalo wakho ongeziwe uzophinde uphele. Ngokungeziwe, ukuphawula kokuphinda kuthunyelwe kuthunyelwe ekhasini lomlobi wombhalo wangempela. Kodwa inkinobho yokuphrinta ivumela ukubona ngokuzenzekelayo inani labantu abangeze okoqobo ekhasini lakhe.
Uma uphinde uthumele, ungangezela umbhalo wakho noma ushintshe okokuqala. Kulesi simo, uma okokuqala kususwe umlobi, umbhalo okopishiwe uhlala ungashintshi. Ngendlela, ukuphawula ku-outpost akuya ekhasini lomlobi wokuqukethwe, kodwa ngeke ukwazi ukubona ukuthi bangaki abantu abadlulisele lolu lwazi kumagazini wabo ngaphandle kwezilungiselelo ezithile.
Inzuzo yezinkinobho ezinjalo yukuthi umbhali weposi angakwazi ukukhawulela ukudluliswa kolwazi komunye umagazini noma umphakathi usebenzisa i-HTML-code.
Ukuphinda kuvamile: Kuyini ?
Emanethiwekhi omphakathi, abasebenzisi baphinda baphinde baphinde ngokuchofoza izinkinobho "Ngiyathanda" futhi "Tshela abangani". Ngesikhathi esifanayo, ungadlulisela ulwazi (izithombe, umculo, ividiyo, okuqukethwe) kusuka ekhasini nomphakathi kuya ekhasini lakho.
Ku "Twitter" kunenkinobho ekhethekile evumela ukuthi wena ukopishe ukungena ngokuxhumanisa nomlobi. Ngokuvamile, uma urekhoda kabusha, kukhona isithonjana esinomcibisholo, ngokuchofoza lapho, ungabona umbhali we-original. Ngenxa yalezi zinkinobho, ungabelana ngokuzenzakalelayo ngolwazi oluthakazelisayo noma olunolwazi nabangani bakho. Ngendlela, ku-"VKontakte" ngosizo lokusesha kabusha abantu abalahlekile noma ukwazisa ngezigebengu.
Manje uyazi ukuthi i-outpost isho ukuthini, futhi uzokwazi ukuhlukanisa ukuphinda uthumele kusuka ekubanjeni okuvamile.
Imibhalo yokuthengisa: izibonelo. Imfihlo yokudala imibhalo yokuthengisa